Mon, Jul 6, 2020 at 5:14am
काठमाडौँ, १४ असार । राष्ट्रपतिबाट प्रदान गरिने चलचित्र जगतको राष्ट्रिय अवार्ड नेपालमा आयोजना नभएको ३ वर्ष भइसकेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको बेफुर्सदीको कारण भन्दै ३ वर्षदेखिका पुरस्कार र सम्मानजति चलचित्र विकास बोर्डमा थन्क्याइएको छ । यही बेला नेपाल सरकार आफैं आयोजक बनेर भारतीय निजी तहको फिल्म अवार्ड समारोह काठमाडौंमा आयोजना गर्न र यसको सम्पूर्ण खर्च बेहोर्न तत्पर रहेको खबर भने आफैंमा..
काठमाडौँ, १३ असार नायिका करिश्मा मानन्धर एसईई परीक्षामा राम्रो नम्बर सहित उत्तिर्ण भएपछि छोरी कविता मानन्धरले भावुक स्टाटस् लेखेकी छिन् । हिजो सार्वजनिक भएको एसईई परीक्षाको रिजल्टमा नायिका करिश्मा मानन्धर राम्रो ग्रेडमा उत्तिर्ण भएकी हुन् । उनले एसईई परीक्षाको लागी निकै नै मिहिनेत गरेकी थिइन् । उनले गरेको मिहेनतको फलस्वरूप राम्रो नतिजा पनि हात पारेकी छिन् । उनले एसईई परीक्षामा ‘बी..
महंगो कलेजबाट अफर आएको छ तर म सरकारी कलेज नै पढ्छु : करिश्मा मानन्धर
काठमाडौं, १३ असोज। नेपाली चलचित्र क्षेत्रकी व्यस्त हुन् करिश्मा मानन्धर। मैतिदेवीस्थित त्रिवेणी पब्लिक स्कुलमा अध्ययन गरेकी करिश्माले डिल्लीबजारको विजयस्मारक परीक्षा केन्द्रबाट परीक्षा दिएकी थिइन् । बिहीबार सार्वजनिक भएको एसईई नतिजा अनुसार उनी बी प्लस ल्याएर उत्तीण भइन् । ३ जीपीए ल्याएर उर्तिण भएसँगै खुशी व्यक्त गर्दै करिश्माले स्थापन संकायमा भर्ना भएर कक्षा ११ पढ्ने बताएकी थिइन्। नायिका मानन्धर आफू घर नजिकैको सरकारी कलेजमा..
काठमाडौँ, १३ असार धेरै बलिउड नायिकाको दिल एकपटक क्रिकेटरसँग जोडिएको नै हुन्छ । बलिउड नायिका र क्रिकेटरको प्रेम नयाँ कुरा होइन । अहिले बलिउड नायक सुनिल सेट्टीकी छोरी आथिया सेट्टी पनि एक क्रिकेट खेलाडीसँग प्रेममा रहेको चर्चा सुरु भएको छ । बलिउडमा चलचित्र ‘हिरो’बाट उदाएकी आथिया यसपछि भने खासै जम्न सकेकी छैनन् । उनी, आथिया अहिले क्रिकेटर के एल राहुलसँग डेटमा रमाइरहेको..
भारतको चर्चित अवार्ड शो 'आइफा-अवार्ड २०१९' काठमाडौंमा हुने
काठमाडौं, १२ असार सरकारले इन्टरनेशनल इन्डियन फिल्म एकेडेमी अवार्ड (आइएफए अवार्ड २०१९) काठमाडौंमा आयोजना गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ। बिहीबार सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रत्ती गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले मन्त्रिपरिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सो जानकारी दिएका हुन। उनका अुसार महानगरपालिका सहआयोजक रहने गरी नेपाल पर्यटन बोर्डको नेतृत्वमा काठमाडौंमा इन्टरनेशनल इन्डियन फिल्म एकेडेमी अवार्ड २०१९ आयोजना गर्न स्वीकृति दिइएको छ। उक्त अवार्ड समारोह नेपाली सेनाको..
नायिका करिश्मा मानन्धर एसईईमा उत्तिर्ण, कति ल्याइन जीपीए ?
काठमाडौं, १२ असार । नेपाल चलचित्र क्षेत्रकी चर्चित नायिका करिश्मा मानन्धर एसईईमा उत्तिर्ण भएकी छिन् । भर्खरै सार्वजनिक भएको एसईई नतिजाअनुसार चर्चित अभिनेत्री मानन्धर थ्री जीपीए ल्याएर उर्तिण भएकी हुन् । मैतिदेवीस्थित त्रिवेणी पब्लिक स्कुलमा अध्ययन गरेकी करिश्माले डिल्लीबजारको विजयस्मारक परीक्षा केन्द्रबाट परीक्षा दिएकी थिइन् । थ्री जीपीए ल्याएर उर्तिण भएसँगै खुशी व्यक्त गर्दै करिश्माले स्थापन संकायमा भर्ना भएर कक्षा ११ पढ्ने..
प्रकाश सपुत र शम्भु राईबीच सहमति, ‘गलबन्दी’को सङ्गीतमा अब शम्भु राईको नाम रहने (विज्ञप्तिसहित)
काठमाडौं, ११ असार । पछिल्लो समय युवा पुस्ता माझँ चर्चित गायक प्रकाश सपुतको लोकदोहरी गीत ‘गलबन्दी’मा आएको विवाद सुल्झिएको छ । प्रकाश सपुतको ‘गलबन्दी’ शम्भु राईको गीतबाट चोरेको आरोप लागेको थियो । सर्जक शम्भु राईले उक्त गीत आफ्नो पुरानो देउसी भैलो गीत आउ नाचौसँग मिल्न गएको भन्दै प्रतिलिपी अधिकार दाबी गरेपछि चुलिएको विवाद सुल्झिएको हो । उनले सपुतविरुद्दको उजुरी पनि फीर्ता लिने..
‘द भ्वाइस अफ नेपाल’बाट किक आउट भएपछि अभया आक्रोशित (हेर्नुस् भिडियो)
काठमाडौं, ११ असार । चर्चित रियमलिटी सो ‘द भ्वाइस अफ नेपाल’ सिजन टूको घोषणा भएसँगै कोचहरु पनि बदलिएका छन् । सिजन वानको कोचहरु सनुप पौडेल र अभया सुब्बालाई सिजन टू मा राखिएको छैन । कोच परिवर्तनको विषयले अहिले खैलाबैला मच्चिएको छ । उनीहरुलाई कोचबाट निकालिएसँगै अभया आक्रोशित बनेकी छिन् । सनुप र अभयाको ठाउँमा गायक राजु लामा र गायिका आस्था राउतलाई..
टिभी पत्रकारद्धारा सलमान खानविरुद्ध मुद्धा दायर
मुम्बई, ११ असार । बलिउड स्टार सलमान खानविरुद्ध पुनः अदालतमा मुद्धा दायर भएको छ । उनीविरुद्ध एक पत्रकारले मुम्बईको अँधेरी क्षेत्रमा लूटपाट गरेको आरोप लगाउँदै उजुरी गरेका हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यम अनुसार टिभी पत्रकार अशोक पाण्डेले सलमान खानसहित अन्य २ जनाविरुद्ध कुटपिट र धम्की दिएको भन्दै उजुरी दिएका हुन् । खानमाथि आपराधिक मुद्दामा मुम्बईको अँधेरी कोर्टमा उजुरी दर्ता गरिएको हो । पत्रकारका..
बलिउडका टाइगर श्राफ र दिशा पटानीको ३ वर्षे प्रेम सम्बन्धमा पूर्णविराम !
मुम्बई, १० असार । बलिउडका टाइगर श्राफ र दिशा पटानीबीच ब्रेकअप भएको छ । पछिल्लो समय निकै चर्चामा रहेको यो जोडी औपचारिक रुपममै सम्बन्ध टुंग्याउने निर्णयमा पुगेको हो । भारतीय एक अनलाइनले उनीहरु सम्बन्ध थप अगाडि नबढाउने निष्कर्षमा पुगेको समाचार प्रकाशन गरेको छ । 'दुबै अब एक साथ नरहने निष्कर्षमा पुगेका छन् । दुबैले यो मिलिजुली नै फैसला गरेका हुन् । उनीहरुबीच अब..
काठमाडौं, ९ असार फिल्म ‘मालिका’ का कथाकार तथा कार्यकारी निर्मातालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । गत सालको तिहारमा प्रदर्शन भएको फिल्म मालिका का कथाकार तथा कार्यकारी नरबहादुर कार्की पक्राउ परेका हुन् । उनलाई सोमबार बालुवाटारस्थित एक रेष्टुरेण्टबाट पक्राउ गरेको प्रहरीले बताएको छ । उनी ‘मोटिभेसनल स्पिकर’ का रुपमा स्थापित छन् । उक्त फिल्म रेखा थापाले निर्माण, निर्देशन तथा अभिनय गरेकी थिइन् । कार्कीलाई..
काठमाडौँ, ९ असार । गायक मोहन राईको गीत ‘मायाको खेल, आँसुको भेल...’ को म्युजिक भिडियोमा प्रियंका र आयुष्मानबीचको बिछोड देखाइएको छ । दीपेन्द्रनाथ शर्माको शब्द र कन्काइस्ट राईको संगीत रहेको यो नेपाली आधुनिक गीतमा युवाबीचको प्रेमपीडा प्रस्तुत गरिएको छ जसमा निर्देशक राजेन्द्र महर्जनले प्रियंका र आयुष्मानबीचको प्रेमकथा बुनेका छन् । ..
काठमाडौँ, ८ असार । नायिका रेखा लिम्बूको नजरमा दुई नायक सौगात मल्लको विशेषता जस्तोे भूमिकामा पनि अब्बल अभिनय हो । दयाहाङले भने अभिनय गरेजस्तो लाग्दैन, जीवन्त हुन्छ । सबै कलाकारको आ–आफ्नै विशेषता हुन्छ । कसैको लुक्स, कसैको अभिनय र कसैको व्यवहारले प्रभाव पार्छ । सबैसँग काम गर्दा केही न केही नयाँ सिकिन्छ । यसकारण मलाई काम गर्न मन लागेका कलाकार धेरै छन् ।..
एजेन्सी, ७ असार जान्वी कपुरले बेली डान्स गरेको भिडियो इन्स्टाग्राममा पोस्ट गरेपछि उनलाई गाली गर्नेको समुह ठूलो देखिएको छ । जान्वीले बेली डान्सको बेइज्जत गरेको भन्दै दर्शकले उनलाई गाली गरेका छन् । जान्वीले हाफ पाइन्ट लगाएर बेली डान्स गरेकी छिन् । धेरैले उनले गरेको डान्स बेली डान्स नभएको भन्दै गाल गरेका छन् । कतिपयले जान्वीको अभिनयलाई लिएर पनि प्रश्न उठाएका छन् । उनलाई..
काठमाडौँ, ६ असार । नेपालीहरु बैदेशिक रोजगारमा जाने क्रम बढेको छ । विदेशिनुको पीडा आफ्नै खालको हुन्छ । गायिका निशु ढकालको श्रीमान विदेश जानेहरुको पीडा समेटेर ‘बर्षदिन भयो परदेश गाको’ बोलको गीत ल्याएकी छिन् । जीवनसाथी साथमा नहुँदा श्रीमतीको मनमा कस्तो पीडा पर्छ भन्ने विषय गीतमा उतारिएको छ । नविन के तिमिल्सिनाको शब्द संगीत रहेको गीतमा निर्देशन तथा सम्पादन पनि तिमिल्सिनाकै रहेको..
काठमाडौँ, ६ असार । गायिका तथा मोडल टिएम केसीको भर्खरै ब्रेकअप भएको छ । अष्ट्रेलियामा रहेकी केसीले आफ्नो ब्रेकअप पछि म्युजिक भिडिओ ब्रेकअप सम्बन्धि नै तयार पार्ने भएकी छिन् । भिडिओ अन्तिम तयारीमा रहेको उनले बताएकी छिन् । ब्रेकअपमा ८० प्रतिशत आफ्नै कथा रहेको उनले बताएकी छिन् । केसीले आफ्नो गीतमा नेपाली तथा अष्ट्रेलियन कलाकारलाई अभिनय गराउँदै आएकी छिन् । उनी आफू..
काठमाडौँ, ५ असार । आम दर्शकका मनमा बस्ने गरी स्थापित हुने ठूलो उत्साहको साथ कलाकारिता क्षेत्रमा लागेकी छिन्— तृप्ति श्रेष्ठ । सानैदेखि स्कुलमा प्रोग्राम हुँदा गायन र डान्समा भाग लिने उनी बुबा र दिदी कलाकारिता क्षेत्रमै भएकाले रंगिन दुनियामा आउन प्रेरित गर्यो । तर उनी ढिलो गरी यो क्षेत्रमा लागिन् । उनले दुई वटा चलचित्र, दुई वटा नै म्युजिक भिडियो र केही..
काठमाडौँ, ३ असार । एक वर्षअघि कलाकारिता क्षेत्रमा प्रवेश गरेकी निशा बराइलीको हाइट ५ फिट १० इन्च छ । सानैदेखि नाच्ने र खेलकुदमा रुची भएकी निशालाई घरपरिवार, साथीभाइ र शिक्षकबाट समेत कलाकारितामा लाग्न सपोर्ट भयो । उनी सफल कलाकार बन्ने लक्ष्यका साथ अघि बढेकी छिन् । उनलाई फिल्महरुको अफर पनि आइरहेको छ तर अभिनयमा परिपक्व भएपछि मात्र रिलमा देखिने उनको सोच..
काठमाडौं, २ असार । नायिका करिश्मा मानन्धरले आफूले साडी लगाउँदा नेताले गुनासो गरेको खुलासा गरेकी छिन् । सुहाउने भएकाले आफुले साडी लगाउने गरेको उनले बताएकी छिन् । ‘मैले साडी लगाउँदा पार्टीका शरीर एक्सपोज गरेको गुनासो गरे रे । आफूलाई सुहाउँछ भने लगाउनले हो’ उनले नयाँ पत्रिकाको फेसन संवादमा भनेकी छिन् ‘अफ्रिकाको कति ठाउँमा लुगै नलगाउँदा पनि भएको छ । लुगा लगाउँदा..
काठमाडौँ, १ असार । नायिका सुरक्षा पन्तले भर्खरै हरर फिल्मको सुटिङ सकिन् । सुटिङ हुँदा उनलाई खासै डर लागेन । वरिपरि मान्छे हुन्थे । तर, अचेल राति सुत्दा भने डराउँछिन् । भन्छिन्, ‘त्यो वेला राति एक्लै ट्वाइलेट जाँदा डर लाग्थ्यो, अहिले पनि सम्झँदा डर लाग्छ ।’ नेपाली फिल्म उद्योगमा हरर विधामा खासै काम भएको छैन । हरर फिल्मको व्यावसायिकतालाई लिएर कतै बहस..
काठमाडौँ, १ असार । अभिनेत्री नम्रता श्रेष्ठ जेठ ३२ मा ३३ टेकिन् । ३२ वर्ष सुखद रूपमा पार गरेकाे उपलक्ष्यमा शुक्रबार ज्ञानेश्वरमा आफ्नै नयाँ एटिक लाउन्जमा जन्मदिन मनाइन् । जन्मदिनमा एक, दुइ हैन पाँच–पाँच वटा केक काटिन् उनले । नम्रताकाे जन्मदिन सेलिब्रेट गर्न कार्यक्रममा अभिनेता रेमन दास श्रेष्ठ, प्रमोद अग्रहरी र अनुप बिक्रम शाही लगायत सहभागी भए । त्यहाँ नम्रतालाई जन्मदिनको शुभकामना..
काठमाडौँ ३२ जेठ माधुरी दीक्षितसँग मेरा कुनै स्मृती छैनन् । विद्यालयबाट भागेर दीक्षितको सिनेमा हेर्न गएको अथवा दीक्षितलाई हेर्नकै लागि ब्ल्याकमा टिकट खरिद गरेका, यस्ता कुनै प्राचिन स्मृती संग्रहण गर्ने मौका मैले पाईन । खासमा म उनको युगको समयको सिनेमा दर्शक होईन । तर पनि १२ कक्षा पढ्दै गर्दा ‘दिल तो पागल हे’ सिनेमा हेर्ने मौका जुरेको थियो । १५ रुपैयाँ भाडा..
काठमाडौँ, ३१ जेठ । कलाका शुभचिन्तक विश्वनाथ भेटवाल २०१९ सालतिर पलाञ्चोक भगवती स्कुल काभ्रेमा पढाउनुहुन्थ्यो । नेत्रबहादुर थापाले लेखेको चार कक्षाको भूगोल पुस्तकमा थियो । नेपालको राजधानी काठमाडौँ उपत्यकाको चित्र । त्यसमा सलल बग्दै गरेको कर्मचासा, वाग्मती, विष्णुमती नदी प्रष्टै झल्किन्थ्यो । उक्त चित्रमा रहेको फूलचोकी, शिवपूरीको सुन्दर दृश्यले लोभ्याउँथ्यो । उक्त सजिव चित्रमात्रै होइन अहिले चल्तीमा रहेको सुन्दर र आकर्षक..
काठमाडौँ, ३१ जेठ । मोडल रेजिना भण्डारी चलचित्र जिस्म २ को प्रमोसन र म्युजिक भिडिओको काममा व्यस्त छिन् । लभस्टोरी चलचित्र जिस्म २ परिवार बसेर हेर्न मिल्ने खालको रहेको उनी बताउँछिन् । चलचित्रमा भण्डारीका साथै नमिता खड्का, रमेश विश्वकर्मा, शारदा गिरि, सुरवीर पण्डितलगायतको अभिनय देख्न सकिन्छ । नेपाली मार्केट लभस्टोरी र कमेडी फिल्मको रहेको बुझाइ उनको छ । रेजिना भन्छिन, ‘मार्केट लभस्टोरी..
काठमाडौँ, ३१ जेठ । ‘काजगपत्र’ र ‘झुम्की’ फिल्मका निर्देशक अपिल विष्ट ‘दासढुंगा’का निर्माता हुन् । अहिले उनी दासढुंगाको सिक्वेल बनाउँदै छन् । अपिल अहिले आफैँ स्क्रिप्ट लेखिरहेका छन् । नयाँ पत्रिकाका नवीन प्यासीसँग विष्टले गरेको दासढुंगा संवाद । दासढुंगा दुर्घटना विवादास्पद घटना हो । यस्तो विषयमा चलचित्र बनाउन समस्या हुन्न ? हामीले ‘दासढुंगा’ फिल्म बनाउँदा धेरै कुरा बाहिर आउन सकेको थिएन । त्यतिवेला पनि..
एजेन्सी, ३० जेठ । अष्ट्रेलियन अभिनेता क्रिश हेम्सवर्थले आफ्नी छोरीको नाम इन्डिया राखेका छन् । आफ्नो छोरीको नाम इन्डिया राख्नुको कारण खोल्दै उनले भने ‘म र मेरी पत्नी एल्सा पेटाकीको मनमा भारत देशको लागि विशेष स्थान रहेको छ । त्यसैले हामीले हाम्री छोरीको नाम इन्डिया राखेका हौं।’ उनले थपे, ‘म र मेरी श्रीमतीले भारतमा लामो समय बिताएका छौं । यहाँबस्दा हामी सोही कारण..
काठमाडौँ, ३० जेठ । गायक प्रकाश सपुतको गीत गलबन्दी यतिबेला चर्चामा छ । यसअघि उनको बोल माया गीत पनि निकै चर्चित बनेको थियो । दुवै गीतमा अन्जली अधिकारीले मोडलिङ गरेकी छिन् । दुवै गीतमा प्रकाशले जति चर्चा पाए अन्जलीको अभिनयले पनि उत्तिकै चर्चा पायो । अन्जलीको आनबानीबारे प्रकाशले नयाँ पत्रिकासँग भनेका छन् । प्रतिभावान अन्जली प्रतिभावान व्यक्ति हो । उनको शारीरिक संरचना जुन..
काठमार्डाैँ, २९ जेठ । बलिउड गायिका नेहा कक्कड यस्तो सेलिब्रेटीमा पर्छिन्, जो सामाजिक सञ्जालमा निकै क्रियाशील छिन् । अहिले टिकटक भिडियोको क्रेज खुब राम्रो छ । नेहा पनि पछि परेकी छैनन् । उनको एक टिकटक भिडियो सार्वजनिक भएको छ । भिडियोमा नेहाले आफ्नो पुरानो म्युजिक भिडियोको टिकटक बनाएकी छिन् । नेहाले जुन गीतमा टिकटक बनाएकी छिन्, सो गीतको भिडियोमा पूर्वप्रेमी हिमांश कोहलीको..
एजेन्सी, २८ जेठ हलिउडकी चर्चित नायिका तथा गायिका सेलेना गोमेज सन् २०१६ देखि सक्रिय रुपमा चलचित्रमा काम गरिरहेकी छन्। २६ वर्षीया गोमेज चर्चित अमेरिकी गायक जस्टिन बिबरका पूर्व प्रेमिका हुन्। उनी सोमबार हलिउड चलचित्र ‘द डेड डोन्ट लाई’ चलचित्रको प्रिमियर सोमा पुगेकी थिइन्। यस चलचित्रमा उनको भूमिका महत्वपूर्ण मानिएको छ। जब सेलेना त्यहाँ पुगिन्। सबैको नजर उनीमा पर्यो। कारण थियो कालो पोशाकमा उनको..
काठमाडौँ, २८ जेठ । म अलि–अलि स्टाइलिस छु । रिल लाइफमा मात्रै नभएर रियल लाइफमा पनि म फेसनेबल छु । र, फेसनमा अलिकति चुजी नै छु । मेरा लागि फेसन सामान्यजस्तै हो । किनकि, जे फेसन गर्दै जान्छु, त्यही सुहाएजस्तो लाग्छ । सामान्यतया म आफूलाई सुहाउने फेसन गर्छु । फेरि, अभिनेताको नाताले पनि केही भिन्न त देखिनैप-यो । मलाई फेसन सोमा..
Results 913: You are at page 12 of 31